gulfstream park fifaninanana sy ny casino hallandale tora-pasika
gulfstream park fifaninanana sy ny casino
vavahady casino sault ste marie famandrihan-toerana
Nefa izy koa no mametra ny lalao goavana ny ambony mety ho tratrany eo amin ny firenena gulfstream park fifaninanana sy ny casino florida. Fa avy amin'ny tany am-boalohany ny taona 2020, na ireo mpandraharaha ireo dia avy amin'ny Osaka hanaitaitra, fa tsy opting ho mifantoka amin'ny Yokohama.
Izay fe-potoana nivoaka sy nandeha niaraka MGM Resorts Iraisam-pirenena sy ny mpiara-miasa Orix sisa tavela ho irery no antoko liana amin ' ny fitondrana ny lalao toerana any an-tanàna. Araka ny Japoney tanàna te ho trano ny lalao, toerana mifidy mpandraharaha mpiara-miasa, ny dingana manaraka dia ny hitondra ny tolo-kevitry ny governemanta federaly gulfstream park fifaninanana sy ny casino hallandale tora-pasika. Ny MGM-Orix vondrona efa ela no heverina ho toy ny mpitarika ao amin'ny Osaka tafiditra resort fifaninanana gulfstream park fifaninanana sy ny casino. Raha izany dia mazava MGM-Orix manana ny Osaka an-tsaha ho an'ny tenany, fa tsy miantoka ny tena fahombiazana vavahady casino sudbury ora ny hetsika.
Dia miasa Resort World Sentosa — iray ao Singapore roa tafiditra resorts vavahady casino sault ste marie famandrihan-toerana. Mety hisy fiantraikany ihany koa Yokohama kokoa noho ny hafa mifaninana faritra.
Izany dia satria efa ela no hany ka hiady. Japoney ny manampahefana teo aloha hoy ry zareo feno fanantenana ny firenena dia soa aman-tsara ny manaraka ny ohatry ny tanàna-firenena ny lalao modely iray voafetra ny isan'ny fananana izay fantatra ho madio, high-end toerana zatra amin'ny nitaona iraisam-pirenena ny mpizaha tany vavahady casino sault ste marie ontario.